Haweenka reer Sudan oo saluugsan sida loogu gacan bidixeeyey kaqeybgal siman ee maamulka… – Hagaag.com
Haweenka reer Sudan oo saluugsan sida loogu gacan bidixeeyey kaqeybgal siman ee maamulka…
Inkastoo doorka Haweenka reer Sudan uu ahaa mid aad u muuqda banaanbaxyadii lagu riday xukunkii al-Bashiir, hadana waxay noqotay in ayna helin wixii horey loogu heshiiyey.
Haweenka Sudan ayaa leh taariikh dhaqdhaqaaq oo aad loo yaqaano, haweeneydii ugu horeysay oo loo doorto barlamaan ee Afrika iyo Bariga Dhexe waxay aheyd Haweenay Sudani ah oo aheyd Fatima Axmed Ibrahim.
Markii xukunka laga tuuray al-Bashiir ka dib, rajooyinka haweenka reer Sudan way sarreeyeen, rajooyinkooduna ahaa helitaanka xuquuqdooda dhammaan qeybaha maamulka ku meel gaarka ah qeybahooda sare, si gaar ah ka qeybgalkooda abaabulkii banaanbax ee lagu riday xukunkii hore, iyo gabaadsiinta mucaaradka, doorkooda kuma koobneyn oo keliya banaanbaxyada laakin waxay hogaan ka ahaayeen shaqada maalinlaha ah ee muqaawamada.
Bishii May, Haweenka reer Sudan waxay bilaabeen olole ay ku gaarayaan kaqeybgal siman oo ku saabsan qaababka isbedelka, iyo dumarku inay helaan kalabar kuraasta dhammaan qeybaha Maamulka Ku-meelgaarka.
Maamulka kooxaha isbedel doonka ayaa horey u muujiyey sida ay uga go’an tahay matalaad cadaalad ah ee haweenka dhamaan hey’adaha Maamulka ee Kumeelgaarka ah, laakiin runtii uma hoggaansamin saamigaas, waxayna haweenku ka maqnaadeen heshiiskii ka qeybgal cadaalad oo la isku waafaqay.
Jiritaanka dhabta ah ee haweenka ayaa u muuqday mid ka hooseeya boqolkiiba inta lagu heshiiyey, taasoo ku kaliftay hoggaamiyeyaasha haweenka in ay bilaabaan inay hor fadhiistaan banaanka hore ee xarunta ciidanka ee kutaala magaalada Khartoum, iyagoo oraah ka dhigtay “Sudan Women for Change” iyaga oo dalbanaya xuquuqdooda ee ka qeybgalka maamulka kumeelgaarka ah.
Saddex bilood ka dib dhacdadaas, Golaha Militariga ee Ku-meelgaarka ah ee Sudan wuxuu soo saaray wareegto lagu dhisayo gole madax-bannaan oo horseedi doona kala-guurka 39 bilood, oo ka kooban 11 xubnood, lix rayid ah iyo shan ka tirsan millatariga.
Haweenka ayaa ku leh labo ka mid ah lixda xilal ee rayidka ah oo ka mid ah 11-ka xubnood ee golaha madaxbanaanida ee Sudan waxaana lafilayaa inay dalka maamulaan muddo seddex sano ah ilaa laga gaaro doorasho, sida ay qortay wakaalada wararka ee Reuters.
Bishii Sebtembar, dowladdii ugu horreysay ee Sudan ayaa la sameeyay tan iyo markii xukunka laga tuuray Madaxweyne Cumar Al-Bashiir 11-kii Abril, waxaana Ra’iisul-wasaare Abdullah Hamdouk u magacaabay afar haween ah jagooyin, gaar ahaan Asmaa Mohamed Abdallah oo loo magacaabay arrimaha dibadda, jagooyinka kale ee haweenka la siiyey ayaa kala ah dhalinyarada, ciyaaraha iyo waxbarashada sare, Shaqada iyo horumarka bulshada, wasiiro ka kooban 18 xubnood ee dowladda ku meel gaarka ah.